Body Mass Index, BMI - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ ကိုယျအလေးခြိနျလိုနလေား၊ ပိုနလေား ဆုံးဖွတျပေးမယျ့ ကိုယျအလေးခြိနျညှနျးကိနျးအကွောငျး သိပွီးပွီလား?
လမျးမှာတှလေို့ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးတှကေ ” ဝလာလိုကျတာ” ” ပိနျသှားလိုကျတာ” လို့ပွောတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို ” ငါ အဝလှနျနပွေီလား” ” ငါ ပိနျလှနျးနပွေီလား” လို့မြားတှေးမိပါသလား?
ဒါတှကေို အတိအကြ အဖွထေုတျဖို့ ကိနျးဂဏနျး တဈခုပဲလိုပါတယျ။ သငျ သှားနကြေ အားကစားလကေ့ငျြ့ရေးစငျတာမြား၊ ဆေးခနျးမြားတှငျ ကွားလရှေိ့သော ညှနျးကိနျးလညျး ဖွဈပါသညျ။
ကိုယျအလေးခြိနျညှနျးကိနျး ( BMI = Body Mass Index) ဆိုသညျမှာ အဘယျနညျး?
အဓိကအားဖွငျ့ ခန်တာကိုယျရှိ ကွှကျသားပမာဏကို တိုငျးတာခွငျးဖွဈသညျ။
လှယျကူစှာတိုငျးနိုငျပါတယျ။ ??? ပေါငျခြိနျစကျတဈခု၊ အရပျတိုငျးရနျပကွေိုးသာလိုပါတယျ။
?? အရငျဆူံး ပေါငျခြိနျရာတှငျ လေးလံသော အဝတျအစား၊ နာရီ၊ ဖိနပျတို့ကို ခြှတျပွီးမှ ခြိနျပါ။ ပေါငျခြိနျကို Kilogram( kg) နဲ့ မှတျသားထားပါ။
အရပျတိုငျးရာတှငျ ခွဖေနောငျ့ကို နံရံနှငျ့ ကပျထားပါ။ ကြောကုနျး၊ ပခုံးတို့ကို နံရံနှငျ့ ထိကပျထားပါ။ အရပျအမွငျ့ကို meter (m) နှငျ့မှတျထားပါ။
BMI= ကိုယျအလေးခြိနျ (kg) / အရပျအမွငျ့ (m)2
BMI တိုငျးခွငျးဖွငျ့ ဘာတှသေိရှိနိုငျသလဲ?
ဒါအပွငျ BMI ပုံမှနျမဟုတျခွငျးနောကျကှယျက ပွသနာမြားကိုလညျးသိရှိနိုငျပါသညျ။ အစဉျကနျြးမာလှပစသေောစတေနာဖွငျ့….
သင် ကိုယ်အလေးချိန်လိုနေလား၊ ပိုနေလား ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ညွန်းကိန်းအကြောင်း သိပြီးပြီလား?
လမ်းမှာတွေ့လို့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက ” ဝလာလိုက်တာ” ” ပိန်သွားလိုက်တာ” လို့ပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ” ငါ အဝလွန်နေပြီလား” ” ငါ ပိန်လွန်းနေပြီလား” လို့များတွေးမိပါသလား?
ဒါတွေကို အတိအကျ အဖြေထုတ်ဖို့ ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုပဲလိုပါတယ်။ သင် သွားနေကျ အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ၊ ဆေးခန်းများတွင် ကြားလေ့ရှိသော ညွန်းကိန်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ညွန်းကိန်း ( BMI = Body Mass Index) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
အဓိကအားဖြင့် ခန္တာကိုယ်ရှိ ကြွက်သားပမာဏကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
လွယ်ကူစွာတိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ??? ပေါင်ချိန်စက်တစ်ခု၊ အရပ်တိုင်းရန်ပေကြိုးသာလိုပါတယ်။
?? အရင်ဆူံး ပေါင်ချိန်ရာတွင် လေးလံသော အဝတ်အစား၊ နာရီ၊ ဖိနပ်တို့ကို ချွတ်ပြီးမှ ချိန်ပါ။ ပေါင်ချိန်ကို Kilogram( kg) နဲ့ မှတ်သားထားပါ။
အရပ်တိုင်းရာတွင် ခြေဖနောင့်ကို နံရံနှင့် ကပ်ထားပါ။ ကျောကုန်း၊ ပခုံးတို့ကို နံရံနှင့် ထိကပ်ထားပါ။ အရပ်အမြင့်ကို meter (m) နှင့်မှတ်ထားပါ။
BMI= ကိုယ်အလေးချိန် (kg) / အရပ်အမြင့် (m)2
BMI တိုင်းခြင်းဖြင့် ဘာတွေသိရှိနိုင်သလဲ?
ဒါအပြင် BMI ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနောက်ကွယ်က ပြသနာများကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ အစဉ်ကျန်းမာလှပစေသောစေတနာဖြင့်….